musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba kwekushanya » Airbnb: 11 akanakisa maguta eLatin America kune vafambi veUS
Kufamba kwekushanya • Aruba Kuputsa Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Colombia Breaking News • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Airbnb: 11 akanakisa maguta eLatin America kune vafambi veUS.
Havasi vafambi veUS chete vanotsvaga nzvimbo dzinopa zvinokwezva zvetsika uye dzinopisa dzemahombekombe kupukunyuka, asi vazhinji vanobva munharaunda yeLatinx vari kutsvaga kubatana zvakare nemidzi yavo uye kushanyira kwavanobva kuti vaone vabereki, vanasekuru uye mhuri dzakakura.
Latin America inzvimbo izere netsika, nhoroondo uye hukuru hwevashanyi.
Zvinoenderana nedatha kubva kuAirbnb, dunhu reLatin America rave tsika kune vafambi vanobva kuUS.
Latin America inomiririra sarudzo inosvikika kune vashanyi vekuNorth America vane avhareji mutengo husiku husingasviki madhora zana nemakumi mashanu.
Latin America inzvimbo izere netsika, nhoroondo uye nzvimbo dzinoyevedza dzevashanyi idzo mumakore mashoma apfuura dzawedzera mukurumbira pakati pevashanyi vanobva kuUnited States.
Pamusoro pezvo, kuve nenzvimbo yakakura yeLatino, kwagara kuine tsika dzekuenda kunharaunda kusimudzira nekuchengetedza hukama hwemhuri hunodiwa nhasi kupfuura nakare kose.
Maererano nedatha kubva Airbnb, iyo Latin America dunhu rave tsika kune vafambi vanobva kuUS.
Kubva pane huwandu hwekutsvaga kwakaitwa papuratifomu, gumi nemaviri akakurumbira maguta echiLatin ndeaya:
Cartagena deIndias, Colombia
Kana zvasvika panguva yezhizha, nzvimbo dzakakurumbira zvikuru dzaive mahombekombe, kunyanya kuMexico uko Playa del Carmen neEsensenada dzaifamba kuenda muna 2021, dzichikwira nzvimbo nhanhatu zvichienzaniswa ne6, pamwe neTulum, iyo yakabva panhamba 2019 kuenda kunhamba 7. mune rondedzero, zvinoenderana nenhamba yekutsvaga.
Nzvimbo dzekuguta dzinoonekerawo kubva pane zvinyorwa, kusanganisira Mexico City naMedellín, vese vari vaviri vanozivikanwa nekuda kwavo kwakawanda tsika.
Dunhu rinomiririra sarudzo inosvikika kune vashanyi vekuNorth America vane mutengo wepakati nehusiku husingasviki $ 150.00.